मुख्यमन्त्री पोखरेल र सुर्य थापा लाई मन्त्री पुनको जवाफ प्रचण्डको लिखित प्रस्ताव आउँदा किन उत्तेजित र छट्पटी ? – yuwa Awaj
मुख्यमन्त्री पोखरेल र सुर्य थापा लाई मन्त्री पुनको जवाफ प्रचण्डको लिखित प्रस्ताव आउँदा किन उत्तेजित र छट्पटी ?
काठमाडौँ : उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भनाइलाई लिएर प्रतिवाद गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय वैठकमा राखेको प्रस्तावले पार्टी एकता ग’म्भिर मोडमा पुगेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि मन्त्री पुनले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन् ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका नेता पुनले पार्टी सचिवालय बैठक प्रार’म्भ र लिखित प्रस्तावले नयाँ बहसको सुरुवात भएको दावी गरेका छन् ।
उनले शनिवार सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पार्टीमा हुने छलफल ,बहस र अन्त’र्विरो’धबाट कोही आत्तिने वा मात्तिने गर्नु जनउत्तरदायी र क्रा’न्तिकारी पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हुन नसक्ने बताएका छन् ।
यस्तो छ मन्त्री पुनको भनाइ
पार्टी सचिवालय बैठक प्रारम्भ र लिखित प्रस्तावले नयाँ बहसको सुरुवात भएकोछ र पार्टी भनेको जमेको पोखरी जस्तो होइन, हिमालबाट बग्ने तीब्र बेगको नदि जस्तो हो । पार्टीमा हुने छलफल ,बहस ,अन्तर्वि’रोधबाट कोही आत्तिने वा मात्तिने
गर्नु जनउत्तरदायी र क्रा’न्तिकारी पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हुनसक्दैन । पार्टी एकताको रक्षा तथा जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै विनाउत्तेजना राजनीतिक बहसबाट पार्टीमा विधि,पद्धति र राजनीतिक सँस्कारको विकास गर्न सबै नेताहरुमा हार्दिक अनु’रोध गर्दछु ।
Prevखुसीको खबर – कोरोना भाइरस वि’रुद्व ९५ प्रतिशत प्रभा’वकारी मानिएको अर्को खोप आयो…हेर्नुहोस् ।
Nextविप्लव पुत्र प्रकाशले दुर्गा प्रसाईलाई मा’फिया घिसार्न मै काफी छु, बाऊ चाहिंदैन भनेपछि !